Ukukhumbula INdibano Eyayiqhutywa “Ehlabathini Lonke”
Kwiminyaka eyi-50 eyadlulayo, amaNgqina kaYehova ayi-583 athabatha uhambo lweeveki ezilishumi olwaluza kubajikelezisa kwihlabathi lonke. Ayengakhenkethi njee. Injongo yolu hambo yayikukudibana namanye amaKristu kwiiNdibano “Zeendaba Ezilungileyo Ezingunaphakade” ezazingo-1963. Ngenxa yokuba ayesiya kuhlangana namanye amaNgqina kumazwe angaphezu kwe-20, ezi ndibano zabizwa ngokuba yiNdibano eyayiqhutywa “Ehlabathini Lonke.”
Uvutho-ndaba lwendibano nganye yayiyintetho enomxholo othi “Xa UThixo EnguKumkani Womhlaba Wonke.” Kuninzi lwezi ndibano le ntetho yanikelwa nguNathan Knorr, owayesuka kwikomkhulu lehlabathi lamaNgqina kaYehova. Wachaza iimeko zehlabathi eziya zisiba mbi ezithelekisa nesithembiso esimangalisayo seBhayibhile sokubuyisela umhlaba kwiParadesi. Ehlabathini lonke, abantu abezayo kule ntetho babeyi-580 509.
Ukutyhutyha ‘Ihlabathini Lonke’ Kwiiveki Ezilishumi
Ezi ndibano zaqala eMilwaukee, eWisconsin, eUnited States. Ukusuka apho iindwendwe zaya ngasempuma. Emva kwendibano yaseNew York zaya eNgilani, eSweden, eJamani naseItali. Kwindawo nganye zazithetha ngeendaba ezilungileyo eziseBhayibhileni.
Abantu abaninzi abahlala kwezi ndawo babeyixabisa into yokuba amaNgqina eziphe ixesha lokuthetha nabo ngeBhayibhile. Elinye ibhinqa laseStockholm, eSweden, lathi: “Ndiya kuhlala ndilukhumbula utyelelo lwenu ubomi bam bonke. . . . Ngaba nhyani nihambe umgama ongaka nize kuthetha nam ngoThixo? Nifanele kukunconywa.
Iindwendwe zaphoxeka xa zifika eAthens, eGrisi. Urhulumente wayirhoxisa imvume yokuqhutywa kwendibano kwiBala lasePanathinaikos ngenxa yeenkokheli zecawa. Kodwa la maNgqina anenzondelelo akazange atyhafe. Ekupheleni kuka-Agasti, kwiindibano ezazibanjelwe emakhayeni abantu nakumabandla asekuhlaleni kwakuze abantu abaphantse babeyi-10 000.
Iindwendwe zasuka eAthens zaya eLebanon, eJordan, kwaSirayeli naseCyprus. AmaKristu alapho azamkela ngezandla ezishushu, ngamany’ amaxesha kusibakho nezihlandlo ezihlekisayo. ENicosia, eCyprus, olunye undwendwe lwalubalisa ngesimanga sezihlangu zalo: “Xa ndibuyela apho ndihlala khona, ndikhulule izihlangu . . . , zazisuka zinyamalale . . . , zize zivele emva kwemizuzu emihlanu sezipolishwe zashayiniswa!”
Ekugqibeleni iindwendwe zatyhutyha iAsia nePasifiki. I-India, iBurma (ngoku eyiMyanmar), iThailand, iHong Kong, iSingapore, iiPhilippines, i-Indonesia, iOstreliya, iTaiwan, iJapan, iNew Zealand, iFiji neKorea zamkela iindwendwe namawaka amaNgqina ahlala kufutshane. Abantu abaninzi balungisa iimeko zabo ukuze baye kwindibano, kodwa abakho abafana nesibini saseYokosuka, eJapan, esasithembisene ngomtshato. Xa indoda yacela kumqeshi ukuya kwindibano eKyoto, wayixelela ukuba imvume inikwa kuphela abo baya emngcwabeni nesimtshatweni. Ekubeni sasilungiselela ukutshata, esi sibini satshata ngaphambi kwexesha esasicebe ngalo. Ngoko ihoneymoon yaso sayichithela endibanweni!
Olu hambo lwaphela ekuqaleni kukaSeptemba ngeendibano ezaziseHawaii naseCalifornia, eUnited States. Kweyokugqibela eyayisePasadena, eCalifornia, abantu ababelapho babengaphezulu lee kwababelindelwe. Ngenxa yoko, kwakunzima ukuba iimoto zihambe emva kocwangciso. Sekunjalo, iphephandaba lasekuhlaleni lacaphula amazwi omphathi wamapolisa owathi “nakubeni ibinkulu kangaka le ndibano, ibiyeyona inocwangco kwendakhe ndazibona.”
Imiphumo Eya Kuhlala Ikho
Ezi ndibano azilibaleki. Incwadi ethetha ngeBhayibhile ethi “Sonke ISibhalo Siphefumlelwe NguThixo Kwaye Siyingenelo” yakhululwa kuloo ndibano, kwaye isasetyenziswa nangoku kwiintlanganiso zamaNgqina kaYehova.
UHarold King, emva nje kokuba ekhululwe entolongweni yaseChina
Kwachazwa ingoma entsha kwindibano eyayiseNew York. Yabhalwa nguHarold King, iNgqina elalikhululwe ejele eTshayina ngo-1963. Yayinomxholo othi “Kwindlu Ngendlu.” UHarold King wayiqamba ngoxa wayevalelwe, yaye amaNgqina asayicula nangoku.
Namhlanje, iindibano zamaNgqina kaYehova zahluke kakhulu. Kudibana amaqela amancinane kwiindawo ezincinane. Ngenxa yeendawo ezininzi ezingenela kuzo iindibano, akusahanjwa kakhulu. Ezi kunye nezinye izinto ezitshintshiweyo zibangela ukuba abantu abaninzi bakwazi ukuphulaphula ucwangciso. Nyaka ngamnye kwiindibano zethu kubakho amaNgqina kaYehova angaphezu kwezigidi ezisixhenxe kunye neendwendwe. Akungethandi ukuba kunye nathi kwiindibano zethu? Fumana indibano ekufuphi kuwe.
Kutheni AmaNgina KaYehova Esiya KwiiNdibano Ezinkulu?
Nyaka ngamnye, siba neendibano ezintathu ezikhethekileyo. Ungangenelwa njani kuzo?
mailto:?body=Ukukhumbula INdibano Eyayiqhutywa “Ehlabathini Lonke”%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D502013259%26wtlocale%3DXO%26srcid=share⊂ject=Ukukhumbula INdibano Eyayiqhutywa “Ehlabathini Lonke”
Ividiyo: Amagqabantshintshi Endibano Zezizwe Ngezizwe Zika-1963